सत्ता .. र दैलाका कुरा - Pradesh Today सत्ता .. र दैलाका कुरा - Pradesh Today
सत्ता .. र दैलाका कुरा
यहाँ सत्ता, अठ्ठा, नैला र दैला भन्ने वित्तिकै जुवातासको प्रसंग नजोड्नु होला र पत्रिकामा पनि जुवातासका प्रसंग चलाउन थालियो भनेर नजान्नु होला, नमान्नु होला र नठान्नु होला ? यो विकृतिरूपी जुवाताससँगको प्रसंग किमार्थ होइन ।
यो केवल संयोगको पुष्टि र संयोगको नजिक भएकोले यसलाई उठान गरिएको हो । यहाँ ‘सत्ता’ भन्नाले देश सञ्चालन गर्ने विधि र प्रक्रिया हो भने देशको राज्यभार ग्रहण गर्ने थले सत्ता हो । यहाँ अठ्ठा भन्नाले सत्तामा चलखेल गर्ने व्यक्ति तथा सत्ताधारी व्यक्तिहरूको संलग्नता,
उनीहरूको पद र कुर्सी र उनीहरूले आफ्नो कोकरूपी कुर्सीलाई भाग्न र थाक्न नदिन गरिएको अठ्याउने कोसिस र प्रयास हो । अर्थात् हामीले नेपालको सत्ताधारी भूमिका हिजोदेखि नै देख्दै आएको रमिता र मेला के हो ? भने सत्ताको भत्तामा माया, मोह, प्रेम, स्नेह, वासना र तृष्णा जागेर त्यसलाई जोगाउन गरिएका अनेकौं प्रयास, कसरत, अभ्यास र कुर्सी दौडका खेल हुन् ।
यही सत्ता र अठ्ठामा लागेर नै देशको विकास र समृद्धिमा ओझेल परेको कुरा सर्वत्र छिपेको छैन । यहाँ नैला भन्नाले नवग्रह वा नौ ग्रहका अवस्था हुन् भने यहाँ दैला भन्नाले हिजोेदेखि आजसम्म देश र जनताले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भोगेका दशा हुन् ।
समृष्टिमा भन्नुपर्दा सत्ता र अठ्ठा नेताका लागि बलवान भए भने नैला र दैला जनताका लागि बलवान भए । देशका शासक वर्ग सत्ताको लिप्सा, सत्ताको मोह र सत्ताको सुविधामा चुर्लम्म डुबेर तपसिलका कुरा जान्न नसक्दा र तपसिलका कुरा थाहा पाउन नसक्दा जनतामा नवग्रह हावी हुन गयो । जसका कारण जनतामा जाग्नुपर्ने जोश, जाँगर र हिम्मत पलाउनुको सट्टा सुक्दै र मर्दै गयो ।
नौ ग्रहका पनि आ–आफ्नै भूमिका छन् । जसअनुसार सूर्य ग्रहलाई उर्जाको रूपमा मानिन्छ । यो सूर्य कमजोर हुँदा जनतामा भएको उर्जा कमजोर हुँदै गयो ।
त्यसैगरी चन्द्रमालाई मनको कारक मानिन्छ । चन्द्रमा कमजोर हुँदा जनताका मन कमजोर बन्दै गयो र मनमा एक किसिमको भय र त्रासले डेरा जमाएर बस्यो । मंगल ग्रह भन्नाले शक्ति तथा इम्युनिटी पावरको ग्रह हो ।
यो मंगल कमजोर हुँदा जनताका आन्तरिक सोंच, विचार, भावना सबै कमजोर बन्दै गयो र भोलिका दिनमा म यो गर्छु र ऊ गर्छु भन्ने मनोबल नै हराएर जान थाल्यो ।
बुध ग्रह भन्नाले विद्या र बुद्धिको कारक ग्रह हो । यो ग्रह कमजोर हुँदा जनताका बुद्धि तथा विवेकले काम गर्न नै सकेन । कुन कुरा राम्रो त कुन कुरा नराम्रो भन्ने विवेक चलाउन नै सकेनन् । जसले गर्दा जनता एकप्रकारका अनिर्णयको बन्दी बन्दै गए ।
वृहस्पति ग्रह भनेको व्यक्तित्वको कारक ग्रह हो । यो ग्रह कमजोर हुँदा जनताले आफ्नो भूमिका, अधिकार, आफूले पाउने अधिकार समेत ठम्याउन सकेनन्, जान्न सकेनन् र जनता जनार्दन भनेको कुरा बुझ्न सकेनन् ? शुक्र ग्रह भनेको धन सम्पत्ति तथा भौतिक सुख सुविधाको कारक ग्रह हो ।
यो ग्रह कमजोर हुँदा जनताले कहिले पनि आफूले चाहेको सुन्दर महलमा सुख, शान्ति र समृद्धिका साथ आफ्नो जीवन बिताउन पाएनन् ? सधैं एक गाँस भात र एकसरो टालोको लागि देशदेखि परदेशसम्म भौतारिनु प¥यो । शनि ग्ह भनेको मेहनती तथा परिश्रमको कारक ग्रह यो हो।
यो ग्रह कमजोर हुँदा काम गरेर खाने र जनता, पाखुरी बजारेर खाने जनता, पसिना पोखेर खाने जनता, प्रकृतिसँग जुधेर खाने जनता अन्यौलको भूमरीमा पर्न बाध्य भएका छन् । हातमा हलो, कुटो, कोदालो भएपनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने कहाँ र कहिले ? भन्ने प्रश्नको जवाफ आजसम्म पनि कसैले दिन सकेका छैनन ?
राहु ग्रह भनेको षड्यन्त्र कारक ग्रह हो । यो ग्रह कमजोर हुँदा जनताले जस्तो अवस्थामा पनि आफ्नो दुःख र पीडाको पैची फर्काउने हिम्मत कसेका छैनन् ? आज सबैकुरा नेताका कारण दुःख भोगिरहदा समेत नेतालाई पड्यन्त्रमा फसाउने कुनै धन्दा रचेका छैनन् र सोचेका छैनन् ?
केतु ग्रह भनेको पर्दाभित्रबाट नकारात्मक भूमिका खेल्ने ग्रह हो । यो ग्रह कमजोर रहदा जनताले कहिल्यै पनि अरूका कुरा सुनेनन्, अरूका कुरा मानेन र अरू देशका जनतालाई हेरेनन् ?
केवल सदासर्वदा आशावादी बन्दै गए र आफ्ना देशका नेतालाई स्वागत सम्मान गर्दै गए । यसरी जनतालाई नौवटै ग्रह कमजोर हुँदा आज जुन दशा भोग्नुपरेको छ यो आफैमा दयनीय र सोचनीय अवश्य छ ।
यसरी जनताका नौवटा ग्रह बिग्रनु र जनताका यो दशका लाग्नुमा सत्ताधारी व्यक्ति, शक्ति, समूह, संगठन, मोर्चाको अहम् भूमिका हुँदाहुँदै पनि जनता त्यसलाई जानेर मात्र बसिरहेका छन् ।
अब पनि यसैगरी चलिरहने हो र चलाइरहने हो भने बिग्रिएका ग्रह र बिग्रिएका दशाले भोलिको भयानक कसैले रोक्न नसक्ने र छेक्न नसक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै शासक वर्ग चनाखो नहुने हो भने त्यसको अतुलनीय घाटा सत्ताधारीलाई नै हुनेछ ।
यदि यो कुरा सत्ताधारीले बेलैमा जान्न र बुझ्न सकेनन् भने यसको दूरगामी असर पनि स्वयम्ले नै भोग्ने छन् । ग्रह लाग्ने वा दशा लाग्ने भनेको कहिँ कतैबाट ढुंगो, डल्लो वा माटो मुग्रो आएर शिरबाट ट्वाक्क लाग्ने होइन ।
ग्रह लाग्ने भनेको प्रतिकूल समयको सिर्जना हुने हो । दशा लाग्ने भनेको प्रतिकूल समयलाई सामना गर्न नसक्ने कमजोर अवस्था हो । यो सबै अवस्था प्रकृतिबाट प्राप्त हुने मात्र पन िहोइन । यो कृत्रिम तरिकाले पनि प्राप्त हुने गर्दछ ।
यतिबेला जनतामा ग्रह लागेको अवस्था छ र दशा चलेको अवस्था छ । ग्रह र दशा सदैव चल्ने चलायमान चक्रिय प्रणाली हुन् । तर आजको बेला र आजको समयमा चलेका ग्रह र दशा भनेका अशुभ र अप्रिय ग्रह दशमा हुन् ।
यो यसर चल्नुमा सत्ताधारीको पनि ठूलो भूमिका र हात छ । किनभने यदि सत्ताधारी व्यक्ति, शक्ति, समूह, दल, पार्टी, मोर्चा, संगठनले सधैंजसो यो सत्ता समात्ने र अठ्याउने खेललाई प्राथमिकतामा नराखेको भए सायद यो स्थिति र परिस्थिति आउने थिएन होला । नेताका तर्फबाट विगतदेखि वर्तमानसम्म सत्तालाई अंगालो मार्ने, च्याप्प समात्ने र फुत्किनै नदिने खेल र ध्यान भयो ।
यसरी देशको नेतृत्व ग्रहण गर्ने नेता नै सत्ता र अठ्ठाको खेलमा लागेपछि नैलाको नौग्रह र दैलाको दशा भोग्ने देश र जनताभन्दा अरू को हुने ? भन्दा लाज लाग्छ, सुन्दा सरम लाग्छ, देख्दा अचम्म लाग्छ, लेख्दा आश्चर्य लाग्छ र भोग्दा गजब लाग्छ ।
हाम्रो यो अवस्थाको अन्त्य कहिले होला ? यतिबेला कोही कोरोनाको करहमा, कोही रमाइलो शरममा, कोही कमाउने र जमाउने रहरमा, कोही ठग्ने र लुट्नेको लहरमा रहकाले उत्तेजनाको बहरमा, कोही भावनाको नहरमा, कोही मृत्युको जहरमा, कोही भूमरी र जालको दहरमा, कोही कहिल्यै नभुल्ने बगरमा एउटै कोरोना रोगको संक्रमणले एउटै भूमिका मानव प्राणीलाई यसरी फरक–फरक फल दिइरहेको छ ।
यो अवस्थाको एकमात्र चलायमान शक्ति भनेको सरकार वा देश हाँक्ने पात्र हुन् । उनी नै यो देशका रक्षक हुन् । यदि उनले विवेकशील ढंगले सोंच्न सकेनन् भने जनताले न्याय पाउने अवश्य छैनन् । यो बेला कुरा गर्ने,
गफ हाँक्ने, फूर्ति देखाउने, खाफ झार्ने र तर मार्ने बेलै होइन । यो बेला केवल गरेर देखाउने हो । जनतामा आइपरेका बाधा र अवरोधलाई तुरून्ता–तुरून्तै फुकाउने काम नै सरकारी पक्षको हो । सरकारले गरेको कामको मूल्यांकन गर्ने जनता स्वयम् छन् ।
कसैले पनि मैले यस्तो गरे र उस्तो गरे भनेर सिठ्ठी फुक्नु पर्ने अवस्था नै छैन । सरकारको काम विपत्ति स्याहार्ने र आपत्ति सम्हालने हो । यति गरे पुग्छ । आपत–विपतको बेला आवश्यक छलफल र बहस गर्नुको सट्टा सिधैं फिल्डमा ओर्लेर काम देखाउनको लागि हामी जनताको सरकारलाई आग्रह छ । फेरि यो बेला जनताको ध्यान केही ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मोड्नका लागि अनेकौं षड्यन्त्रकारी मुढा तेर्साउने पनि राम्रो काम होइन ।
जनता आफ्नो तारमा एक सुरमा हिडिरहेको बेला र एउटा संकटसँग जुधिरहेको बेला अचानक अर्को संकट सुताएर जनताको मनलाई भाँड्ने काम पनि कोही कसैले गर्नुहुन्न । यदि कहि कतैबाट यस्ता कुरा आयो भने पनि सरकारले यदि माइनस गरेर अघि बढ्नुपर्दछ ।
पछिल्लो कोरोनाको कहरभित्र हुँदा भ्रष्टाचारका कुरा, अनियमितता कुरा, सीमा विवादका कुरा, सरकार परिवर्तनका कुरा, संविधान संशोधनका कुरा, कुनै विधेयक पास फेलका कुरा, एमसीसीका कुरा, पार्टीभित्र आरोप प्रत्यारोपका कुरा, पार्टीभित्र गुट–उपगुटका कुरा, पार्टी विभाजनका कुरा, पार्टीभित्र द्वन्द्वको कुरा, पक्ष–प्रतिपक्षबीको दोहोरीका कुरा लगायत यावत शासन सञ्चालनका कुरा वाइहात र वेतुकका कुरा हुन् ।
यदि कोही कसैले देश र जनताका लागि राजनीति गरेको हो भने सेवा गर्नेले सेवा गर्ने बेला पनि यही हो । धर्म गर्नेले धर्म गर्ने बेला पनि यही हो । सहयोग गर्नेले सहयोग गर्ने बेला पनि यही हो । उपकार गर्नेले उपकार गर्ने बेला पनि यही हो । परोपकार गर्नेले परोपकार गर्ने बेला पनि यही हो ।
जनहित गर्नेले जनहित गर्ने बेला पनि यही हो । जनकल्याण गर्नेले जनकल्याण गर्ने बेला पनि यही हो । मानव संरक्षण गर्नेले मानव संरक्षण गर्ने बेला पनि यही हो ।
जनताको आँसु पुछ्नेले जनताका आँसु पुछ्ने बेला पनि यही हो । धर्म गर्नेले धर्म गरेर देखाउने बेला पनि यही हो । देश बनाउनेले देश बनाउने बेला पनि यही हो । मुलक सपार्नेले मुलुक सपार्ने बेला पनि यही हो । शक्ति देखाउनेले शक्ति देखाउने बेला पनि यही हो ।
अर्थात् जो जसले आफूलाई जे जस्तो ठानेको छ र मानेको छ । यो प्रमाणित गर्ने बेला पनि यही हो । यतिबेला गर्न सकेको छैन र यतिबेला मानव कल्याणरूपी काम गर्न सक्दैन भने त्यसले वा उसले यो पछि कुनै धाक नलगाए पनि हुन्छ । प्रकृतिले यतिबेला हरेकको अग्नी परीक्षा गर्दैछ ।
हिजोसम्म आफूलाई यस्तो र त्यस्तो भने उपमा दिन चाहनेले आजको दिनमा के कस्ता काम हुँदैछन् ? ती सबै जनतासामु छर्लङ्ग हुँदैछ । अबको यही बेला हरेकले आफ्नो अनुहार कोरोनाको ठूलो ऐनामा हेर । त्यहाँ तिमीले आफूलाई कस्तो अनुहार पाउँछौं ?
त्यसैका आधारमा आफ्नो अनुहारलाई कहाँ लिपपोत र थपघट गर्नुपर्ने भनेर जान । यदि यो कोरोनाको ऐनामा तिमी राम्रो छौं भने तिमी सुन्दर छौं । यदि तमी नराम्रो छौं भने तिमी कुरूप हौं । ऐना तिम्रो अगाडि छ, दिनहुँ एकपटक अनुरा अवश्य हेर ।
नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव
दोषीलाई कारवाही र व्यवसायीलाई क्षतिपूर्तिको माग
जेठ ३०, २०७७
क्याम्प राखेर स्वाव संकलन
सेनेटरी प्याड बनाउन सिक्दै किशोरीहरु
भदौ २८, २०७६